Cadaan mise madow!: Canada oo Soomaali ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax ah. | Qurbaha.Net :: Isha Wararka Soomaalida Qurbaha
Home Somali News Cadaan mise madow!: Canada oo Soomaali ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax...
Cadaan mise madow!: Canada oo Soomaali ku tilmaantay inaysan ahayn madow sax ah.
Jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarasho ee ka qeyb qaata barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa codsaday in loo soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadeed ee ardayda dhigata waxbarashada ka sarreysa dugsiyada sare. Hase yeeshee xogta lagu qeexay ardaydaas waxay ka duwan tahay midda taariikhiga ah ee ay heyso Jaamacadda California, sababo la xidhiidha isbadalladii la sameeyay 2010-kii,” ayaa lagu yidhi qoraal ay jaamacadda ku daabacday boggeeda internet-ka.
Previous articleShaqada ugu horreysa ee Biden waa fududeynta u safridda Mareykanka.